Vol. 12 FEBRUARY, 1911. Nha. 5
Copyright, 1911, neHW PERCIVAL.
KUNE kukudzwa, rupo, kururamisira, kutendeseka, chokwadi uye mamwe maitiro muzvakawanda uye kusasarudzwa kushandiswa nevasinganzwisisiki, ushamwari hunotaurwa nezvinovimbiswa zvehukama huripo uye hunobvumirwa kwose kwose; asi, seimwe humwe hutsika, uye, kunyange zvazvo hunoonekwa mune imwe nguva nevanhu vose, isungo nehurumende zvisingawanzoitiki.
Pose apo vanhu vazhinji vanobatanidzwa pamwe chete, zvibatanidzwa zvinoumbwa pakati pevamwe vanoratidza kune vamwe vasina hanya kana vasingadi. Ichocho chikoro chechikoro chinonzi ushamwari hwavo. Vanodanidza kuvanzika uye vanogovana muzviitiko zvakafanana uye mitambo uye maitiro uye maitiro akabuda kunze kwekunyengera kwevechidiki. Iko musikana wechitoro, musikana wechikori, musikana wehutano ushamwari. Vanotaurirana zvakavanzika zvavo; vanobatsirana pakuita zvirongwa zvavo, uye mumwe anotarisirwa kuita zvese zvishoma zvinyengeri izvo zvirongwa zveumwe zvinogona kuwedzerwa, kana kumudzivirira apo pakawanikwa zvisingadi; hukama hwavo hunobvumira munhu kuti azvisarudzire kune imwe yezvinhu zvakawanda zvinokosha zviduku umo mune ruzivo rwakafanana.
Varume vebhizimisi vanotaura nezvehukama hwavo, iyo inowanzoitwa nenzira yebhizimisi-nenzira yekutengeserana. Apo nyasha dzinobvunzwa uye dzinopiwa dzakadzorerwa. Mumwe nomumwe achapa rubatsiro rwemari uye kutsigirwa uye anokweretesa zita rake kune rimwe dambudziko uye chikwereti, asi anotarisira kudzoka mune mutsa. Ngozi dzimwe nguva dzinotorwa muhukama hwebhizimisi kuburikidza nemumwe anobatsira kune imwe iyo zvido zvake zvinoparadza; uye ushamwari hwebhizimisi hwakawedzerwa kusvika pamwero wekuti umwe akaisa pane imwe iyo chikamu chikuru chebasa rake, kuitira kuti rimwe, kutya kurasikirwa kana kuti kurasikirwa nehupfumi hwake, zvigone kuwanikwa zvakare. Asi izvi hazvirevi ushamwari hwebhizimisi. Ushamwari hwemabhizimisi hunogona kunge hunoenzaniswa nehuwandu hweWall Street murume uyo, apo akagadzirira kuronga uye kutasva kambani yekumigodhi yekubvunzurudza, uye achida kuipa kuonekwa kwesimba uye kumira, anoti: "Ndichakurudzira Mr. Moneybox uye naVaDollarbill naVaChristwarden, pamusoro pekambani. Ivo shamwari dzangu. Ndichavabvunza kuti vatore migove yakawanda yezvitoro uye vachavaita vatungamiri. Ndezvipi shamwari dzako dzakanaka kana iwe usingakwanisi kuzvishandisa. "Ushamwari hwezvematongerwe enyika hunoda kutsigirwa nemutambo, kubvumira nekufambidzana zvirongwa zveumwe neumwe, kuisa chero ipi zvayo mari, zvisinei nokuti yakarurama, inobatsira munharaunda , inopa ropafadzo yakakosha, kana yehupenyu hwakakanganisika uye hunonyangadza. "Ndinogona kuvimba neshamwari yako," mutungamiri anobvunza mumwe wevatsigiri vake kana chirevo chekufungidzira chiri kukamanikidzwa pamutambo wake uye kuiswa kuvanhu. "Une iwe, uye ndichakuona iwe," ndiyo mhinduro inomutsigira ushamwari hweumwe.
Kune hukama pakati pegenteel rakes nevarume venyika vanotsanangurwa neumwe wavo apo anotsanangurira kune mumwe, "Hongu, kusimbisa kukudzwa kwaCharlie nekuchengetedza ushamwari hwedu, ndareva nhema semurume." Mukushamwaridzana kwembavha nezvimwe mhombwe, haisi kungotarisirwa kuti mumwe munhu achabatsire mumwe kune mhosva, uye agogoverana nemhosva sekupamba, asi kuti achaenda kune zvakakanyanyisa kuti amudzivirire kubva mumutemo kana kuti awane rusununguko rwake kana akasungwa. Ushamwari pakati pevamwe vafambisi vengarava, masoja nemapurisa zvinoda kuti zviitiko zveimwe, zvisinei zvisina kukodzera uye kunyadzisa, zvichatsigirwa uye zvinodzivirirwa nemumwe kuti amubatsire kubata chinzvimbo chake kana kuiswa kune imwe yepamusoro. Neshamwari dzose idzi kune mudzidzi wekirasi umo muviri mumwe nomumwe kana kuti zvigadziro zvinotemwa.
Kune ushamwari hwemapani, vanofamba makomo, vanovhima, vafambi nevatsvakurudzi, iyo inoumbwa nekukandwa kwavo pamwe chete mumamiriro akafanana, vachitarisana nematambudziko akafanana, vachiziva uye vachirwadziwa kuburikidza nematambudziko akafanana uye vachiita zvinangwa zvakafanana mumaonero. Ushamwari hweizvi hunowanzoumbwa nemanzwiro kana kudiwa kwekudzivirirana pamwe chete nezvengozi dzenyama, nokutungamirirwa uye rubatsiro rwakapiwa munzvimbo dzine njodzi, uye nekubatsirwa nemhuka dzomusango kana kuti dzimwe vavengi mumasango kana murenje.
Ushamwari hunofanirwa kuve hwakasiyana nehumwe hukama hwakadai sekuzivana, kufambidzana, ukama hwepedyo, hukama, hukama, hukama, kuzvipira, kana rudo. Vaya vanoziva, vangave vasina hanya kana kuti vasinganzwisisi kune mumwe nemumwe; ushamwari hunoda kuti mumwe nomumwe ave nehanya uye nekuremekedza kune imwe. Kushamwaridzana kunoda kubvumirana kwepabonde munzanga uye kuvaraidza mutsa; asi avo vanofambidzana vangave vachitaura zvakaipa kana kuti vanopesana nevaya vanovabvumirana nazvo. Ushamwari hahuzobvumi kunyengera kwakadaro. Kushamwaridzana kungave kwakambovapo kwemakore mubhizimisi, kana mune dzimwe mitsara inoda kuti munhu avepo, asi angave achishuva uye anozvidza munhu waanoita naye. Ushamwari huchabvumira kusava nemanzwiro akadaro. Kuzivikanwa kunobva pakuzivana kwepedyo kana kubva kune unhu hwepabonde, izvo zvingave zvisina kunaka uye zvisingadi; hapana manzwiro akaipa kana kusada kunogona kuvapo neshamwari. Kushamwaridzana chiito kana humwe huri mune humwe unofarira mumwe munhu pamwoyo, hungave husinganzwisiswi kana kunzwisiswa neumwe; ushamwari hausi humwe chete; inodzokorora uye inonzwisiswa nezvose. Comradeship ishamwari yega uye ushamwari, izvo zvinogona kuguma apo shamwari dzinoparadzaniswa; ushamwari hahuna kutarisana nemunhu oga kana kushamwaridzana naye; ushamwari hungave huripo pakati pevasati vasati vamboonana uye vanotsungirira, zvisinei kunyange zvakanyanya kureba munzvimbo uye nguva zvinogona kupindira. Kuzvipira kune mafungiro ayo munhu anozvibata kune munhu chero upi zvawo, ari pasi kana kuva; nyika iyo yaanoita nayo zvakasimba, mukushanda nokuda kwechikonzero, mukuedza kuwana kuve nechido kana chinangwa, kana mukunamata kweMwari. Ushamwari huripo pakati pemafungiro nemafungiro, asi kwete pakati pemafungiro uye zvakanaka, kana chirevo chisingazivikanwi; kana kushamwaridzana nekunamata iyo pfungwa inopa kuna Mwari. Ushamwari hunoita kuti pave nemafungiro akafanana kana maviri pamwe chete ekufungidzira nekuita pakati pepfungwa nepfungwa. Rudo runowanzoonekwa sechishuvo chakasimba uye kuchimirira, kudururwa kwakasimba kwemanzwiro uye rudo kune chimwe chinhu, munhu, nzvimbo kana kuva; uye rudo kunyanya kunofungidzirwa uye kunoshandiswa kuratidza manzwiro kana manzwiro, kana hukama hune rudo huripo pakati pemhuri dzemhuri, pakati pevanoda, kana pakati pemurume nemudzimai. Ushamwari hunogona kuva pakati pemhuri yemhuri uye pakati pevarume nevakadzi; asi ukama pakati pevadikani, kana murume nemudzimai hausi ushamwari. Ushamwari hunoda kusagutsikana kwemazwi kana hukama hwepanyama. Ukama hwehukama ndohwepfungwa, hwepfungwa, uye hausi hwepfungwa. Rudo rwevanhu kuna Mwari, kana naMwari wemunhu, mafungiro evanhu vashoma kune munhu mukuru, kana wehumwe hune simba kune umwe uyo akazara uye asingakwanisi kumunzwisisa. Ushamwari hunoenderana nekuenzana. Ushamwari hunogona kutaurwa kuti rudo, kana rudo rusingabatsiri; manzwiro kana ruzivo rwehukama, husingafungi nezvisungo zvemashoko; imwe nyika umo pfungwa yepamusoro uye yakaderera inopera.
Pane dzimwe nzira iyo izwi rakashandiswa naro, sehukama huri pakati pevanhu nembwa, bhiza, nemamwe mhuka. Icho chisungo pakati pemhuka nemunhu, chakakanganisa ushamwari, ndiko kufanana kwezvakasikwa mukuchiva, kana kugadzirisa kwechido chemhuka kune chiito chepfungwa dzevanhu pamusoro payo. Mhuka inoteerera kune chiito chevanhu uye inofadza uye inopindirana nemafungiro ake. Asi zvinogona kungopindura kuburikidza nebasa, uye kugadzirira kuita izvo izvo zvido zvayo zvinokwanisa kuita. Mhuka inogona kushumira murume uye nyore nyore kufa mubasa rake. Asi zvakadaro hakuna hukama pakati pemhuka nemunhu, nokuti ushamwari hunoda kuwirirana pamwe nekugadzikana kwemafungiro nemafungiro, uye hakuna kuve nekuteerera kana kutaurirana kwepfungwa kubva kumhuka kumunhu. Mhuka yacho inogona kunyanya kuratidza kufunga kwevanhu kwaari. Haikwanise kunzwisisa pfungwa kunze kwekunge yakabatana nechido chayo; haikwanise kubva pakufunga, kana kupa munhu chero chinhu chepfungwa. Kubudirira pakati pemafungiro nemafungiro kuburikidza nepfungwa, zvinokosha muhukama hwehukama, hazvibviri pakati pemunhu, pfungwa, uye mhuka, chido.
Muedzo wehukama hwechokwadi kana hwechokwadi ndewekusina udyire kana udyire hwenyama kune mumwe mune imwe. Shamwari yechokwadi haisi yevanhu vanofarira. Panove nehukama pakati pevaya vane ruwavo rwekufarira, asi ushamwari hwechokwadi hauna pfungwa yekuwana chimwe chinhu kune izvo zvakapiwa, kana kuva munzira ipi zvayo inotsiviwa pane zvinoitwa. Shamwari yechokwadi ndeyekufunga kweumwe uye kubata pamwe chete kana kuti kune imwe yehupenyu hwake, pasina kubvumira kufunga kupi zvako kwekuda kufarira kunopesana nezvinofungidzirwa uye zvinoitirwa mumwe. Ushamwari hwechokwadi huri mune vavariro dzisina udyire dzinokonzera kufunga uye chiitiko kune zvakanaka zveumwe, pasina hanya.
Kuita kana kuzvifananidza kuita zvinodiwa nemumwe, kana chikonzero chechiito ichocho chiri chokugutsikana kwevanhu uye kuzvifarira, hachisi ushamwari. Izvi zvinowanzoratidzwa apo kune mharaunda yezvido uye apo avo vane hanya vanotaura nezvehukama hwavo kune umwe neumwe. Ushamwari hunovapo kusvikira munhu achifunga kuti haasi kuwana mugove wake, kana kusvikira imwe ikaramba kubvumirana naye. Ipapo hukama hwehukama hunopera uye izvo zvainzi shamwari ndezvekuzvitsvakira kufarira. Kana munhu akabata ukama hunonzi ushamwari nomumwe munhu kana vamwe nokuti nekuda kweshamwari yakadai iye anogona kuwana rubatsiro, kana kuti zvaanoda zvinogutsikana, kana kuti kuwana zvaanoda, hakuna ushamwari. Uchapupu hwokuti unonzi shamwari ushamwari, hunoonekwa kana munhu achida mumwe kuti aite zvakaipa. Ushamwari hunogona kuvapo apo mumwe kana vose kana vose vachawana zvikomborero neshamwari; asi kana kuzvifarira kune chinangwa chinovabata pamwe chete, ushamwari hwavo hunoratidzika. Mukushamwaridzana kwechokwadi mumwe nomumwe achava nehanya kune mumwe munhu pamwoyo pane zvishoma pane zvake, nokuti kufunga kwake kune umwe kune mukuru uye kunokosha kudarika zvaanoda uye zvaanoda, uye zviito zvake uye kubata kwake zvinoratidza maitiro emafungiro ake.
Shamwari yechokwadi haizobvumirwi nehupenyu hwehupenyu huri pangozi yekuchengetedza iwe pachako. Mumwe anotarisira kana kuda kuti shamwari yake iise upenyu hwake pangozi, kureva nhema, kurasikirwa nerukudzo rwake, kuitira kuti aponeswe kubva kune chero ipi zvayo yezvipingamupinyi, haasi shamwari, uye ushamwari hahupo padivi rake. Kuzvipira kukuru kunogona kuva uye kunoratidzwa ushamwari kana kuzvipira kuchidikanwa, zvakadai sokutarisira kwenguva refu uye nemoyo murefu kutadza kwepanyama kana kwepfungwa kweumwe uye nokushivirira kushanda naye kuti abvise kutambura kwake uye kumubatsira mukusimbisa pfungwa dzake. Asi ushamwari hwechokwadi hahudi, hunorambidza, kuita kwepanyama kana tsika kana pfungwa dzisina kururama, uye kuzvipira kunogona kungoshandiswa chete kusvika pakuzvipira kune ushamwari kunoda kuti hapana chakaipa kuitwe kune ani zvake. Ushamwari hwechokwadi ndehwepamusoro-soro hwetsika uye hutendeseka uye pfungwa dzakanaka kubvumira kuzvipira kana kutamira kuenda kune imwe iyo iyo inonzi inoshandiswa neshamwari kana ikakuvadza vamwe.
Mumwe angave achida kuzvipira iye oga uye angatobayira hupenyu hwake pamusana wehukama, kana chibayiro chakadaro chiri chechinangwa chakanaka, kana nechibayiro chakadaro iye asingazvipi zvinodiwa nevaya vanobatana naye, uye kana zvinodiwa muhupenyu zvinopiwa chete, uye haasi kubva pabasa. Anoratidza hukama hwakanyanya uye hukuru kune wese huchakuvadza munhu uye haaiti chakaipa, kunyange pamusana weshamwari.
Ushamwari huchaita kuti munhu asvike pakufunga kana kuita kune shamwari yake, kumurambidza mukutambudzika, kumunyaradza mumatambudziko, kurerutsa mitoro yake uye kumubatsira paanoshayiwa, kumusimbisa mukuedzwa, kuisa tariro mune kuora mwoyo, kumubatsira kusunungura kusava nechokwadi kwake, kumukurudzira kana ari mumatambudziko, kumuudza kuti angadzinga sei kutya kwake, nzira yekukunda nayo matambudziko ake, kutsanangura kuti ungadzidze sei kubva pakuora mwoyo uye kuchinja dambudziko kuti uve mukana, kumudzivirira iye kuburikidza nedutu remhepo hupenyu, kumukurudzira kusvika kune zvitsva zvinowanikwa uye pfungwa dzakakwirira, uye, hongu, haazomboregi kana kuvhiringidza kusununguka kwake mukufungidzira kana shoko.
Nzvimbo, zvakatipoteredza, mamiriro ezvinhu, maitiro, maitiro, chimiro uye nzvimbo, inoita sechikonzero kana zvikonzero zvehukama. Ivo chete vanoita sevari. Izvi chete zvinopa zvirongwa; hazvisi izvo zvinokonzera ushamwari hwechokwadi uye husingaperi. Ushamwari hunoumbwa uye huri kutsungirira iye zvino hurumende yekushanduka-shanduka. Haisi kungoitika kamwe chete, kunyange ushamwari hungava kutanga zvino uye hunoenderera mberi uye hurarama nokusingaperi. Ushamwari hunotanga kuburikidza nekuonga. Kuonga haisi kungoonga chete iyo munhu anobatsirwa anonzwa kune uyo anobatsira. Handizvo kuvonga kunopiwa kuchitonhora kunopa zvipo, uye handiwo kunzwa kunokanganiswa kuonga kwakaratidzwa kana kuratidzwa nechepasi kune izvo zvakasimudzwa nemukuru wake. Kuonga ndechimwe chezvakanakisisa zvezvakanaka uye chimiro chakafanana nemwari. Kuonga ndiko kumutswa kwepfungwa kune chimwe chinhu chakanaka chakataurirwa kana chakaitwa, uye kusina udyire uye kusununguka kwemoyo kune uyo akazviita. Kuonga kunongedza zvose castes kana nzvimbo. Muranda angave akaonga mutenzi wemuviri wake nokuda kweumwe mutsa unoratidzwa, semuchenjeri ane chivimbo kumwana kumumutsa kumubato wakajeka weimwe chikamu chechinetso chehupenyu uye Mwari ane rutendo kumunhu anoratidza uMwari yeupenyu. Kuonga ishamwari yehukama. Ushamwari hunotanga apo pfungwa inopera mukuonga kune umwe nekuda kweumwe mutsa unoratidzwa neshoko kana chiito. Mumwe mutsa unoratidzwa mukudzoka, kwete nenzira yekubhadhara, asi nekuda kwekukurumidza mukati; nokuti chiito chinotevera mafungiro emwoyo nemafungiro uye mumwewo maonero ake anoona kuonga kwechokwadi chekuonga kwezvaakaita; uye naizvozvo, mumwe nomumwe anonzwa kuvimbika uye mutsa weumwe kune iye oga, kunzwisisa pamwe uye mupfungwa zvinokura pakati pavo uye zvinobereka kuva ushamwari.
Matambudziko achasimuka uye ushamwari huchave hwakaedzwa zvakanyanya, asi ushamwari huchabata kana iwe pachako unofarira hauna simba. Zvinhu zvinofanira kusimuka izvo zvinopesana kana kuonekwa kuputsa ushamwari, zvakadai sokuenda kunzvimbo iri kure, kana kuti kusabvumirana kunobuda, kana kuti kunofanira kukurukurirana kusaguma, zvakadaro, ushamwari, kunyange zvazvo hunoita sokuti hwakaputsika, hahusi pakuguma. Kunyange zvazvo vasingafaniri kuona mumwe asati afa, ushamwari, hwakatanga, hahuna kuguma. Apo pfungwa idzodzo dzinopindazve mune hupenyu hunotevera kana huchauya, dzichasangana zvakare uye ushamwari hwavo huchavandudzwa.
Pavanoswededzwa pamwechete, kumwe kuratidza kwekufunga neshoko kana kuti kuita kuchaita kuti pfungwa dzivepo uye ivo vachanzwa uye vafunge sehama, uye muhupenyu huno hukama hunosimbiswa hungave hwakabatanidzwa muhutano hwehukama. Zvakare shamwari idzi dzichavandudzwa uye dzichaonekwa dzakaputswa nekuparadzana, kusabvumirana kana kufa; asi panguva imwe neimwe yekuvandudzwa kweshamwari imwe yeshamwari ichakurumidza kuona imwe uye ushamwari huchagadziriswa zvakare. Havazozivi nezvehukama hwavo mumitumbi yavo yekare kune dzimwe hupenyu, asi hukama hwemhuri harusi huno hwakasimba kune iyo. Ushamwari hwakasimba hunoonekwa huchibva pangozi kana pakuziva kwenguva pfupi, uye iyo inopedzisa kuburikidza nekudarika kwehupenyu, usati watanga pane zvinoitika zvakangoerekana zvaitika pamusangano wemukana. Musangano uyu hauna ngozi. Icho chaiva chibatanidzo chinoonekwa muketani refu yezviitiko zvinotenderera kuburikidza nemamwe hupenyu, uye musangano mutsva uye kugamuchirwa nemanzwiro ehama ndiko kutora ushamwari hwekare. Vamwe vanoita kana kuti kutaura kweimwe kana kuti zvose zvinokonzera shamwari-kunzwa uye ichaenderera mberi.
Kuparara kweshamwari kunotanga apo mumwe ane godo nekutarisira kuripira kune imwe, kana shamwari yake kutarisira kune vamwe. Kana achinge achishuva shamwari yake yekuti ave nefuma, zvaanoita, matarenda kana unyanzvi, kana achida kuisa shamwari yake mumumvuri kana kumuratidza, manzwiro e godo negodo achaumba kana kushandisa zvingangodaro kusavhiringidzika uye kusava nehanya ichavatungamirira mubasa ravo rokuparadzwa kweshamwari. Nehupenyu hwavo huchaenderera mberi huchanzi huvepo hupikisi hwehukama. Kusada kuchaonekwa uye kuchakura kukura. Izvi zvinowanzotangira, apo kufarira kwacho kwakasimba, nekushungurudza ushamwari.
Kushungurudzwa kweshamwari kunotanga apo chinangwa chako ndechokushandisa kune imwe kunze kwekufungidzirwa kwake. Izvi zvinowanikwa mune bhizinesi, apo munhu angada shamwari yake kuti ichinje chikonzero chekumushumira panzvimbo pokutambudza chinangwa kushandira shamwari yake. Muzvematongerwe enyika inoonekwa apo munhu anoedza kushandisa shamwari dzake mune zvaanofarira pasina chido chekuvashandira navo. Mumagariro evanhu kushungurudzwa kweshamwari kunoratidzwa apo mumwe wevaya vanodana mumwe nomumwe shamwari, anoshuva uye anoedza kushandira shamwari kuti ave nehanya naye. Kubva pane chikumbiro chomumwe munhu kuita chimwe chinhu chinokonzera nekuda kweshamwari, uye kana kuita ichi kuchipesana nezvimwe zvekuda, kushungurudzwa kweshamwari kunogona kutorwa kune chikumbiro cheumwe kuti aite mhosva. Apo mumwe wacho anowana kuti uyo anonzi shamwari yake ndeyechido chekuwana mabasa ake, ushamwari hunopera uye hunogona kufa, kana hunochinja huchipesana neshamwari. Ushamwari hahufaniri kushungurudzwa.
Zvakakosha pakuenderera mberi kweshamwari ndezvokuti mumwe nomumwe anofanira kunge achida kuti mumwe ane rusununguko rwekusarudza mupfungwa yake nekuita. Apo mafungire akadaro aripo muhukama hucharamba huchiripo. Apo hudo hwoga hunotangwa uye huri mberi, ushamwari hunogona kuchinja huchiva hutsinye, kupesana, kuvhiringidza, uye ruvengo.
Ushamwari hukama hwepfungwa uye hwakavakirwa uye hwakasimbiswa pane zvepamweya uye kubatana kwakakwana kwevanhu vose.
Ushamwari ihwohwo hukama huri pakati nepfungwa nepfungwa, iyo inokura uye inogadziriswa semigumisiro yechinangwa chepfungwa uye nekuita sekunakira zvakanakisisa nekuve zvakanaka kweimwe.
Ushamwari hunotanga apo chiito kana kufunga kweumwe kunokonzera imwe pfungwa kana zvimwe pfungwa kuti zive ukama pakati pavo. Ushamwari huri kukura sezvo pfungwa dzinotungamirirwa uye zviito zvinogadzirwa zvisina hanya nezvido uye nekuda kwechigarire kune vamwe. Ushamwari hwakaumbwa zvakanaka uye hunosimbiswa uye haugone kuputsika apo hukama hunoonekwa huri hwemweya mumamiriro ayo uye chinangwa.
Ushamwari humwe hukuru uye hwakanakisisa hwehukama hwose. Iyo inomutsa uye inounza uye inovandudza unhu hwakanyanya uye hwakanakisisa hwepfungwa, kuburikidza nekuita kwevanhu. Ushamwari hunogona uye huripo pakati pevaya vane zvido zvavo uye vane zvishuvo zvakafanana; asi kana zvido zvehupenyu kana kufanana kwechido zvinogona kuva chikonzero cheushamwari hwechokwadi.
Ushamwari huri kunyanya ukama hwepfungwa, uye kunze kwekuti hukama hwepfungwa huriko hungave pasina hukama chaihwo. Ushamwari ndeimwe yekusingaperi uye yakanakisisa yehukama. Iro ine chokuita nezvose zvinyanzvi zvepfungwa; iyo inokonzera zvakanakisisa mumurume kuita chimwe chinhu kune shamwari yake, uye, pakupedzisira, inokonzera zvakanakisisa kune imwe kuti zviite kuvanhu vose. Ushamwari ndechimwe chezvinhu zvinokosha, uye zvinokurudzira zvimwe zvinhu zvose, mukuvakwa kweunhu; inoedza nzvimbo dzisina simba uye inoratidza nzira yekuvasimbisa; inoratidza kukanganisa kwayo uye nzira yekuzvipa, uye inotungamirira mubasa nekuedza kusina udyire.
Ushamwari hunomutsa uye hunodana ruregerero uko kwave kusina kunyanya kana kusina tsitsi kune imwe nguva, uye kuisa shamwari yako zvakare kubatana nematambudziko ehama yake.
Ushamwari hunobudisa kutendeseka kuburikidza nekumanikidzira kunyengedza uye kuvhara kwenhema uye kuzvifungidzira kuti zvive pasi, uye kubvumira kuti chimiro chechokwadi chioneke sezvazviri, uye kuzviratidza zvinyengeri mumatunhu ayo. Kutadza kunogadzirwa nehukama, pakumisa miedzo uye kuratidza kuvimbika kwayo kuburikidza nematambudziko ese eshamwari. Ushamwari hunodzidzisa kutendeseka mupfungwa uye pakutaura uye nekuita, nekuita kuti pfungwa dzifunge pamusoro pezvakanaka kana zvakanakisisa kune shamwari, nekuita shamwari kuti ichitaura iyo pasina quibble iyo yaanotenda kuti ndeyechokwadi uye neshamwari yake yakanaka. Ushamwari hunosimbisa kutendeka mumunhu kuburikidza nekuziva nekuchengetedza zvivimbiso. Kusatya kunowedzera nekukura kweshamwari, nekusava nekusahadzika uye kusavimba, nekuziva nekuchinjana kwechido chakanaka. Unhu hwesimba hunosimba uye hwakachena sezvo ushamwari hunofambira mberi, kuburikidza nehutano hwahwo mune zvido zveumwe. Ushamwari hunowedzera kusazvida mumunhu, nekutsamwa kunotsamwisa nekudzinga pfungwa dzechido chisina kunaka, runyararo kana utsinye uye nokufunga nezvimwe zvakanaka. Kukuvadza kunoshevedzwa uye kusimbiswa kuburikidza neshamwari, nokusakwanisa kukuvadza shamwari yake, kuburikidza neshamwari iyo ushamwari hunokurudzira, uye nekusada kweshamwari kuita chimwe chinhu chinogona kukuvadza mumwe. Nokushamwaridzana ushamwari hunofuridzirwa, mune chido chokugovana uye kupa zvakanakisisa izvo munhu ane shamwari dzake. Kusina udyire kunodzidziswa kuburikidza neshamwari, nekuchimbidza uye nekufara kugadzirisa zvido zvemunhu kune zvakanakisisa shamwari yake. Ushamwari hunokonzera kukudziridza kuzvidzora, nemuitiro wekuzvidzora. Ushamwari hunovhiringidza uye hunogutsa ushingi, nekuita kuti munhu atarisana nenjodzi asingatyi, kuti aite noushingi, uye kutsigira zvine simba chikonzero cheumwe. Ushamwari hunokurudzira kushivirira, nekuita kuti munhu atakure zvikanganiso kana maitiro evamwe shamwari yake, kutsungirira pakuvaratidza kwaari kana paine zano, uye kutsungirira nguva inofanirwa kuti vakunda uye vashandure muzvinhu zvakanaka. Kushamwaridzana mukukura kwekukodzera, nekuremekedzwa kune umwe, uye kutendeseka nekuvimbika uye murefu wehupenyu hune hukama hunodikanwa. Kuburikidza nehukama hunowanikwa simba rekubatsira, nekuteerera matambudziko ake, kupinda mumatambudziko ake, uye nekuratidza nzira yekukunda matambudziko ake. Ushamwari hunosimudzira kuchena, nekuchiva kune zvinangwa zvakakwirira, nekuchenesa kwepfungwa dzako, nekuzvipira kune zvokwadi. Kushamwaridzana mukukudziridza kusarura, nekuita kuti mumwe atsvake, kutsoropodza uye kuongorora vavariro dzake, kugadzirisa, kuongorora uye kutonga pfungwa dzake, nekugadzirisa zvaanoita uye kuita mabasa ake kune shamwari yake. Ushamwari ihwohwo rubatsiro kune unhu hwakanaka, nekutsvaga tsika dzakanakisisa, nerunako hwakanaka uye nekurarama maererano nezvinodiwa. Ushamwari ndomumwe wevadzidzisi vepfungwa, nokuti inogadzirisa zvisizvo uye inoda pfungwa kuti ione hukama hwayo hwakangwara kune imwe, kuyera uye kunzwisisa iyo hukama; iyo inopa kufarira mune dzimwe zvirongwa uye zvinobatsira mukukudziridza kwadzo; kunokonzera pfungwa kuchinjwa, kuenzaniswa uye kunyatsoenzanisa nekuderedza kusagadzikana kwayo, kuongorora kushanda kwayo, uye kutonga zvarinotaura. Ushamwari hunodiwa nepfungwa yekudzora kwaro kusagadzikana, kukundwa kwekumirisana kwayo, uye kuunza kurongeka kunze kwekuvhiringidzika nokururama mupfungwa uye kururamisira mukuita.